Rehefa manao presque isle casino nisokatra indray
rehefa tsy mieritreritra poker hitranga
rehefa manao presque isle casino misokatra
rehefa manao plainridge park casino nisokatra indray
Trano filokana any Nevada efa nanakatona vonjimaika toy ny isan-baiko ny Governora Steve Sisolak, mba miadana ny fihanaky ny coronavirus. Fananana ao amin'ny fanjakana ireo dia ilaina mba hanidy rehetra lalao milina, fitaovana, latabatra, lalao sy ny hafa mifandray amin'ny fitaovana alohan'ny misasakalina tamin'ny alarobia amin'ny trano fisakafoanana sy fisotroana hita eo ireo fananana ihany koa mikatona.
Ny famerana dia hitoetra ao an-toerana, fara fahakeliny, 30 andro ary ho fanaraha-maso ny Nevada Lalao fanaraha-Maso ny Biraom -, izay ho tompon'andraikitra amin'ny famoahana bebe kokoa ny manamarika rehefa manao presque isle casino nisokatra indray. Ny Governora nanome baiko amin'ny fanakatonana ny rehetra tsy manan-danja ny orinasa, ao anatin'izany ny varotra antsinjarany, noho ny coronavirus areti-mifindra; hatramin'izao, ny otrik'aretina dia niteraka maherin'ny 8.000 ireo maty eran-tany, avy amin'ireo manodidina 208,000 toe-javatra. Sisolak hoe: "Ity ihany ny fahaiza - rehefa tsy mieritreritra poker hitranga.
Nandritra ny fotoana izay ny olona dia mahazo marary avy fotsiny ny maha-akaiky ny hafa, tsy izany no fotoana ho an'ny tena mba hijanona hisokatra rehefa manao presque isle casino misokatra. Tsy izany no fotoana ho an'ny trano filokana mba hisokatra."Efa maro ireo marefo indrindra ao amin'ny fanjakana Nevada sy nizara manana andraikitra mba hiarovana ny zokiolona, ny mpiasan'ny fahasalamana sy ny rehetra ny voalohany responders."Izany no tsy mora ny fanapahan-kevitra mba hahatonga.
Fa any andro vitsivitsy lasa izay, vondrona sy fikambanana manerana ny faritra Nevada, no nandroso rehefa manao plainridge park casino nisokatra indray. Ny ezaka nataon'izy ireo nandritra izany fotoan-tsarotra izany dia hahatonga ity tafio-drivotra mora kokoa ny toetr'andro.".
Soiree vatolampy casino st julien
Petit casino caen rue de falaise
Inona ny ambony indrindra tanana dia afaka mahazo any poker
Black jack namirapiratra kasety 100mm
Belterra casino ao florence indiana
Zaridaina bar casino sakafo
Best strategy for blackjack fifaninanana
Petit casino boulevard de suisse
Ny renirano casino buffet foza tongotra